AXMED MADOOBE OO KA HADLAY KIISKA BADDA EE HORYAALA ICJ – XAMAR POST
AXMED MADOOBE OO KA HADLAY KIISKA BADDA EE HORYAALA ICJ
By Mohamed Abdi On Mar 16, 2021
Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland Maxdaxweyne Axmed Madoobe oo ka hadlay kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo dhageysigiisu ka socdo ICJ ayaa sheegay inuu raja weyn ka qabo in Soomaaliya ay guul ka soo hooy-doonto kiiskaas.
“Madaxweynaha Dowlada Jubaland H.E Ahmed Mohamed Islaam ayaa sheegay in Xukuumada iyo Shacabka Jubaland ay garab taaganyihiin sidoo kalena rajo weyn ka qabaan in ay guulaysato dooda dalkeena ee aan kusoo ceshaynayo badeena ay muranka galisay Kenya,” ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey bogga madaxtooyada Jubbaland.
“Waxaan garab taaganahay Qareenada iyo xubnaha kale ee maalintii labaad u taagan dooda Dacwada Badda ee inagala dhaxeysa Kenya ee taala Xarunta Maxkamada Cadaaladda Adduunka” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ‘ayuu Madaxweynuhu ugu baaqay inay u midoobaan sidii ay u difaacan lahayeen baddooda iyagoo wadajira.’
“Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in si wadajir ah loogu midoobo difaaca Baddeena taas oo ah masuuliyad saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed. Waana guuleysaneynaa Inshallah” ayuu yiri Madaxeynaaha Jubbaland.
BY MOHAMED YAHYE JINOW
Dhageysiga DACWADDA BADDA EE SOOMAALIYA OO MAALINKII LABAAD SOCOTA
QOOR-QOOR OO LA KULMAY JAMES SWAN